Abahlinzeki be-reagent ye-Molecular Biology kanye Nemboni |China Molecular Biology reagent Manufacturers
Uchungechunge lwe-PCR oluqondile lwegazi
Tshala uchungechunge lwe-PCR oluqondile
Izinto zokusetshenziswa ze-IVD
Asikho isidingo sokukhathazeka ngokuwohloka kwe-RNA.Lonke uhlelo alunayo i-RNase-Free
Khipha ngempumelelo i-DNA usebenzisa i-DNA-Cleaning Column
Khipha i-DNA ngaphandle kokwengeza i-DNase
Kulula—yonke imisebenzi iqedwa ezingeni lokushisa legumbi
Ukusheshisa—ukusebenza kungaqedwa ngemizuzu engu-30
Iphephile—ayikho i-organic reagent esetshenzisiwe
Ikhithi Yokuzihlukanisa Yeseli Ye-RNA
Isebenza ekamelweni lokushisa (15-25 ℃)
Ngekholomu Yokuhlanza I-DNA
Inani eliphakeme kakhulu lama-RNA
Ukushesha:Qeda ukukhipha emizuzwini eyi-11
Ukuphepha:Ayikho i-Organic chemical
I-Plant Total RNA Isolation Kit Plus
I-RNase-Free Ukusebenzisa Ikholomu Yokuhlanza I-DNA Ilula—yonke imisebenzi iqedwa ekamelweni lokushisa Ngokushesha—ukusebenza kungaqedwa emizuzwini engu-30 Kuphephile—akukho mshini wezinto eziphilayo osetshenziswayo.
I-Animal miRNA Isolation Kit
◆ Yonke le nqubo iqhutshwa ekamelweni lokushisa (15-25°C), ngaphandle kokugeza kweqhwa kanye ne-centrifugation enezinga lokushisa eliphansi.
◆Isethi egcwele yekhithi i-RNase-Free, asikho isidingo sokukhathazeka ngokuwohloka kwe-RNA.
◆Ikholomu Yokuhlanza I-DNA ibopha ngokukhethekile i-DNA, ukuze ikhithi isuse ukungcoliswa kwe-DNA ye-genomic ngaphandle kokwengeza i-DNase eyengeziwe.
◆Isivuno esikhulu se-RNA: Ikholomu ye-RNA kuphela kanye nefomula eyingqayizivele ingahlanza i-RNA ngempumelelo.
◆Isivinini esisheshayo: Ukusebenza kulula futhi kungaqedwa phakathi nemizuzu engama-30.
◆Ukuphepha: akukho kukhishwa kwe-organic reagent edingekayo.
◆Ikhwalithi ephezulu: Izingcezu ze-RNA ezikhishiwe zinokuhlanzeka okuphezulu, azinawo amaprotheni nokunye ukungcola, futhi zingahlangabezana nezidingo zomfula ongezansi.
◆Izinhlelo zokusebenza zokuhlola ezihlukahlukene
Ikhithi Yokuhlukanisa I-DNA Yamanzi
◮Akukho ukungcoliswa kwe-RNase:Ikholomu Ye-DNA Kuphela ehlinzekwa ikhithi yenza kube nokwenzeka ukususa i-RNA ku-DNA ye-genomic ngaphandle kokwengeza i-RNase phakathi nokuhlolwa, ukuvimbela ilabhorethri ukuthi ingangcoliswa i-RNase yangaphandle.
◮Isivinini esisheshayo:I-Foregene Protease inomsebenzi ophezulu kunama-protease afanayo, futhi igaya amasampula ezicubu ngokushesha;ukusebenza kulula, futhi ukusebenza kwe-genomic DNA extraction kungaqedwa kungakapheli imizuzu engama-20-80.
◮Kulula:I-centrifugation yenziwa ekamelweni lokushisa, futhi asikho isidingo se-centrifugation yezinga lokushisa eliphansi elingu-4°C noma imvula ye-ethanol ye-DNA.
◮Ukuphepha:Akukho kukhishwa kwe-organic reagent edingekayo.
◮Ikhwalithi ephezulu:I-DNA ye-genomic ekhishiwe inezicucu ezinkulu, ayikho i-RNA, ayikho i-RNase, nokuqukethwe kwe-ion ephansi kakhulu, okungahlangabezana nezidingo zokuhlola okuhlukahlukene.
◮Isistimu ye-Micro-elution:Ingakhuphula ukugxila kwe-genomic DNA, elungele ukutholwa komfula noma ukuhlolwa.
Imbewu Yezitshalo(Enkulu) Eqondile ye-PCR Kit II-UNG
◮Akukho ukuhlanzwa kwe-DNA okuthatha isikhathi nokubizayo okudingekayo.
◮Isidingo sesampula sincane, thatha nje imbewu eyodwa.
◮Azikho izindlela zokwelapha ezikhethekile ezinjengokugaya nokuchoboza okudingekayo, futhi ukuhlinzwa kulula.
◮Isistimu ye-PCR ethuthukisiwe yenza i-PCR ibe nokucaciswa okuphezulu nokubekezelela okuqinile kuma-PCR reaction inhibitors.
Imbewu Yezitshalo(Encane Naphakathi) I-PCR Kit I-UNG eqondile
Imbewu Yezitshalo(Polysaccharide Polyphenol ecebile, encane) Direct PCR Plus Kit I-UNG
- Akukho ukuhlanzwa kwe-DNA okuchitha isikhathi nokubizayo.
- Isidingo sesampula sincane, thatha nje imbewu eyodwa.
- Azikho izindlela zokwelapha ezikhethekile ezinjengokugaya nokuchoboza okudingekayo, futhi ukusebenza kulula.
- Uhlelo lwe-PCR olulungiselelwe lwenza i-PCR ibe nokucaciswa okuphezulu nokubekezelela okuqinile kuma-PCR reaction inhibitors.
- I-anti-pollution PCR system 2× Seed PCR EasyTM Mix (UNG), engaqeda ngempumelelo ukungcola okubangelwa imikhiqizo ye-PCR futhi iqinisekise ukunemba nokunemba kokukhulisa.
Imbewu Yezitshalo (enkulu nephakathi) I-Direct PCR Plus Kit II-UNG
Imbewu Yezitshalo(Polysaccharide Polyphenol rich Small) Direct PCR Plus Kit I
Imbewu Yesitshalo(i-Polysaccharide Polyphenol ecebile, enkulu futhi ephakathi) Direct PCR Plus Kit II-UNG